पूर्व माओवादी ल:डाकु निर्मलाको पिडादायि नरकिय अबस्था! – Newsharpal24
January 19, 2021 adminLeaveaComment on पूर्व माओवादी ल:डाकु निर्मलाको पिडादायि नरकिय अबस्था!
काठमाडौं-आठ वर्षीय जीवन विक घरको सुरमा उभिएर ‘मलखाद’ माथि बसेकी अचेत आमाको पीडा हेर्ने गर्छन्। आमाको जलेको खुट्टा अनि अशक्त अवस्था देख्दा उनी भक्कानिन्छन्। तत्कालीन माओवादी द्व:न्द्वमा घरपरिवार त्यागेर पूर्वल लडाकु ३२ वर्षीया निर्मला विक ‘साधना’ तीन वर्षदेखि अचेत छिन्।
उनलाई बेलुका अँध्यारो बढ्दै गए पछि बाख्रा र कुखुरासँगै गोठमा सुताइन्छिन् अनि बिहान तिनै घरपालुवा पशुपन्छीसँगै बाहिर सारिन्छिन्।त्रिवेणी ५,जुगार जबरबोटकी निर्मला आठ वर्ष अगाडि रोगले थलिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ । छिटो ठूलो हुन पाए आमाको उपचार गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने जीवनलाई परेको छ। आमाको दैनिकीले उनलाई असाध्य पीडा हुन्छ तर बाल्यावस्थाका उनी निरीह छन्।
‘आमा सधैं भुइँमा नांगै सुत्नुहुन्छ। सुत्ने लुगा पनि छैन अनि लगाउने कपडा पनि छैन।जाडोमा पनि यस्तै हो, आमालाई हेर्दै जीवनले भने, ‘सानो छु, केही गर्न सक्दिनँ। छिटो ठूलो हुन पाए कमाएर औषधि गराउने मन छ।’ माओवादी ल:डाकुको पाँचौं डिभिजन ब्यारेक दहबनमा हुँदै निर्मला बिरामी परेकी थिइन् ,पछि थलिइन् अहिले मृत्युसँग लड्दैछिन्।
Tagged पूर्व माओवादी ल:डाकु निर्मलाको पिडादायि नरकिय अबस्था!